काठमाण्डौलाई विकास हैन व्यवस्थापनको खाँचो छ - Nepali Online News Media-shikharnews.com
काठमाण्डौलाई विकास हैन व्यवस्थापनको खाँचो छ
२०७५ पुस २० शुक्रवार
विकासको कुरा गर्दा विकासको ठेक्का लिई बसेकाहरु सिङ्गो देशलाई बाइपास गरि किन काठमाण्डौलाई मात्र फोकस गर्छन? तमाम देशवासीको आजको जल्दोबल्दो प्रश्न हो । विकासको नांउमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, अन्य सबै खालका भौतिक संरचना देशको विभिन्न पिछडिएका ठांउहरुमा किन पुग्दैनन्? के पिछडिएका ठांउहरुमा जिवनयापन गरि बसेका जनताहरु विकास विरोधी भएर हो त? आम जनताको प्रश्न हो यो । आज भर्खर मात्र हैन, बिसौं तिसौ दशक अगाडीनै काठमाण्डौ कन्क्रिटको जङ्कलको नामवाट परिचित भइसकेको छ । अझै कति थप्ने कन्क्रिट? यो वास्तविकता विकासका ठेकेदार भनाउदाहरुलाई थाहा नभएको पक्कै हेन तर बुझ पचाई रहेको मात्र अवस्था हो । यदि चाहेको खण्डमा काठमाण्डौको विकास गाउंगाउंमा पु¥याउन नसक्ने हैन तर यस्तो चाहनानै देखिएन विकासका ठेकेदारहरुमा ।
उदाहरणको लागि केहि जिल्लाहरु जस्तै तराईकै कुरा गर्ने हो भने सिराहा, सप्तरी, रौतहत जस्ता जिल्लाहरुमा खै विकास? पचासौं वर्ष देखि विकासको नाममा कुन उदाहरनिय विकास भएको छ? खै कता छन एउटा स्तरिय कलेज? कता छन सुविधायुक्त अस्पताल? जिर्ण पुल भत्कदै छ कहिले बन्ला नयां पुल? त्यस्तै रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट जस्ता जिल्लाहरुमा कहिले बन्ला अत्यावश्यक विकासका पूर्वाधारहरु? केहि प्राचिन सभ्यता वोकेका वस्तुहरु वाहेक कुन चाहिं त्यस्तो स्मरणिय विकास भएको छ? कालीकोट, दैलेख, सल्यान, मुगु, आदी सुदुर पश्चिम जिल्लाहरुमा कहिले पुग्ने विकास ।
जतिबेला नि काठमाण्डौ केन्द्रित विकासले देशको चौतर्फि विकास कहिले कसले गर्ने? काठमाण्डौलाई आवश्यक पूर्वाधार विकास हाललाई प्रयाप्त भईसकेको छ । अब गर्ने भनेकौ काठमाण्डौको भौतिक विकास हैन भएको विकास संरचनालाई व्यवस्थित पार्ने हो । किन यतातिर ध्यान पु¥याइदैन? के सडक विस्तार, सडक फराकिलो गरेर मात्रै सडक सफा, सुन्दर अनि विकास हुने हो र ? त्यसो हुने हो भने अहिले सम्म काठमाण्डौ भित्र धेरै सडक विस्तार भइसकेको छ, फराकिलो पनि भएको छ । खै त सडक जाम हट्यो त? जाम त जिउं का तिंउनै छन । विद्यमान सडकमा कोरिएका लेन, जेब्रा क्रसिङ्क आदिको नियमपूर्बक प्रयोग कसले गरिराखेका छन यहाँ? न पैदल यात्रीले न सवारी चालकले नै ।
सवारी साधनले दांया बांया मनपरि ओभरटेक गरे नी हुने । पैदलयात्रु हिडुनु पर्ने सडक पेटी भरि नाना थरिका दुकान थाप्न लगाउने, मोटर बाइक वोर्कशप चलाउन दिने, निर्माण सामाग्री थुपार्न दिने, पैदलयात्रुहरुलाई सडकै सडक हिंड्न बाध्य तुल्याउने, अनि सडक सांघुरो भयो भनि पटक पटक सडक दांया बांयाको घरहरुमा डोजर लगाउदै आतंक मच्चाउने? सडकको बिचौं बिच गाई गोरु मज्जाले हिंड्ने, कुकुर दाडादौड गर्ने । अनि फेरि सडक दुर्घटना बढ्यो रे । किन बढदैन दुर्घटना? जमाना देखि जडान भइरहेको सडक ट्राफिक बत्ती किन बालिदैन ? सडक नियम पालना भएको छ छैन हेर्ने काम कसैले गरको छ यहां? हो यस्तो कुरामा ध्यान पु¥याउनु परेको छ र आजको काठमाण्डौको आवश्यकता भनेको पनि यहिनै होे । यस्ता विचलनहरुलाई तत्काल व्यवस्थित गरियोस भन्ने चाहना हो आम काठमाण्डौवासीहरुको ।
सडक विस्तारकै क्रममा काठमाण्डौस्थित कयन प्राचिन महत्वका सम्पदाहरु मासिएका तथ्य थाहा भएकै कुरा हो । सडक विस्तार हरेक देशमा हुने गरेको छ । तर, घरै मात्र भत्काएर विस्तार गरेका छैनन त । चीनको ग्वाङ्गजाउ होस वा जापानको ओइटा, वा दक्षिण कोरियाको राजधानी सिवलनै किन नहोस, यी ठाउंहरुमा तपाई हामीले अहिले पनि काठमाण्डौको गल्ली भन्दा एकसेएक सांगुरा गल्लीहरु देख्न पाउछौं । खै सडक विस्तारका नाममा ती गल्लीहरु त भत्काइएन त । नया नयां एकसेएक सडकहरु बनेकै छन तर पुराना सडक गल्लीहरुलको पनि व्यवस्थितरुपमै संरक्षित छन । करिव दुई दशक अगाडि मैले काठमाण्डौको हेरिटेज वाकको नाममा तीन दिन तीन विभिन्न रुटमा तत्कालिन अष्ट्रेलियन महामहिम राजदूत किथ गार्डनलाई घुमाउने मौका पाएका थिएं । मलाई राम्ररि याद छ वहांले वाकको अन्तिम दिन आफ्नो मन्तव्य राख्ने क्रममा व्यक्त गर्नु भएको केहि वाक्यहरु । वहांले भन्नु भएको थियो “काठमाण्डौको भित्री शहर साच्चैको एउटा जिवन्त संग्राहलय हो, यसलाई कुनै हालतमा संरक्षण र व्यवस्थित राखिराख्नु पर्छ ।“ के वहांको अभिव्यक्तिले काठमाण्डौलाई व्यवस्थित पार्न महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छैन ?
हो विकास कार्यले कुनै पनि देशमा कहिले नि पूर्णविराम लिदैन । यो निरन्तर चलिरहने प्रकृया हो । फरक यतिमात्र कि विकासको प्राथमिकता पहिला कुन ठाउंमा भन्ने मात्र हो । सारा विकास निर्माण कार्य अब पनि काठमाण्डौमै मात्र थुपार्ने हो भने देशका अन्य गाउंठांउ सधैं अन्धकारनै रहन्छ र त्यहांका वासिन्दाहरु सदैब अन्यायमा पर्ने पक्का छ । तसर्थ, अबको विकासलाई गाउंठाउंमा लैजानु पर्छ त्यो पनि तिब्र रुपमा । काठमाण्डौलाई व्यवस्थित मात्र गर्ने हो ।
क्यालिफोर्नियामा अर्को विमान दुर्घटना! उडान भर्ने क्रममा यात्रुवाहक विमानमा आगो लाग्यो
महिला नेतृत्वले विद्यालय सुध्रिए